Maxay dadka reer Suudaan lacagta ugu keydsadaan barkinta hoosteeda? | CeelGardi News
Maxay dadka reer Suudaan lacagta ugu keydsadaan barkinta hoosteeda?
January 28, 2019 - Written by Wararka
Dad badan oo reer Suudaan ah ayaa hadda doorbidaya in ay lacagahooda gashadaan barkinta hoosteeda halkii ay ka dhigan lahaayeen bangiyada dalkaasi.
Haddii dadku ay lacagta dhigaan bangiyada, waxa ay ka baqayaan in ay adkaato in ay dib u helaan maadaama ay maran yihiin makiinadaha ATM-ka loo yaqaan ee bangiyada yaal ee lagacta lagala baxo.
Bangiyada yar ee lacagta laga heli karo ee gudaha magaalada Khartuum ayaa waxaa caadi ka noqday safaf dhaadheer oo ay dadka ugu jiraan bangiyada.
Waxaa sidoo kale safaf dhaadheer loo galaa helitaanka rootiga.
Waxaa mararka qaar dhacaya in xitaa haddii xilli dambe aad shaqada ka timaadid ay tahay in aad saacado sugtid in aad gaartid daaqadda foornada rootiga lagu sameeyo, ka dibna lagu yirahdo waa uu dhammaaday.
Qiimaha cunnooyinka kale ayaa sidoo kale sii qaaliyoobaya, gaar ahaanna gudaha magaalada caasimadda ah ee Khartuum.
Digirta dalkaasi laga yirahdo fuulka ayaa loo arkaa mid ay tahay in meel kastaa laga helo basle dukaamada caadiga ah qaarkood ayaa hadda joojiyay iibinta digirtaasi. Sababta ayaa ah dadka intooda badan ma awoodaan in ay iibsadaan.
Kaalmadii dowladda oo la jaray
Dhibaatada ayaa ka dhalatay dowladda oo isku dayday in ay ka hortagto in dalka uu ka dhaco burbur dhaqaale, waxaana markiiba ay la timid tallaabooyin gunti giijis ah. Sidoo kale waxaa aad u qiimo dhacay lacagta dalkaasi Suudaan.
Bishii Diseembar ee sanadkii hore, halkii doolar waxaa suuqa madow lagu sarifayay 76 pound oo ah lacagta dalkaasi Suudaan. Lix bilood ka hor, halkii doolar waxaa lagu sarifayay wax ka yar 40 pound oo ah lacagta Suudaan.
Sicir bararka dalkaasi ka jira ayaa bishii Nofeembar ee sanadkii hore gaaray 68% halka sanad ka hor uu ka ahaa 25%.
Dowladda ayaa dhintay lacagihii ay ku kabi jirtay shidaalka iyo rootiga, waxaana arrintaasi ka dhashay sara kac ku yimid qiimaha cunnooyinka daruuriga ahi.
Sare kaca ku yimid qiimaha rootiga ayaa bishii la soo dhaafay waxaa ka dhashay dibadbaxyo waaweyn, kuwaasi oo wali ka soconaya qeybo badan oo ka tirsan dalkaasi Suudaan.
Dibadbaxyadu waxay ka billowdeen magaalada Cadbara 19-kii Diseembar, xilligaasi oo la gubay xarunta xisbiga haya talada dalkaasi ee Al-Mu’tamar Al-Wadhani.
Sansaanta kacdoonkii gugii carabta
Dibadbaxyada ayaa isu badalay kuwo ka dhan ah dowladda dalkaasi, waxaana dadka dibadbaxyada dhigaya ay dalbanayaan in las oo afjaro xukunka madaxweyne Xasan Cumar Al-Bashiir ee dalkaasi ka jiray ku dhawaad 30 sano.
Dibadbaxayaashu oo adeegsanaya halkudhigyo laga dhaxlay kacdoonkii gugii carabta ayaa lagu arkayay dariiqyada magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi, waxa ayna oranayeen “Dadku waxa ay doonayaan in xukuumaddu ay dhacdo.”
Dibadbaxyada ka dhacayay magaalada Khartuum ayaa ah kuwii ugu waaweynaa ee ka dhan ah madaxweyne Cumar Al-Bashiir tan iyo markii uu xukunka dalka kula wareegay inqilaab milatari sanadkii 1989.
Xaaladda ayaa dhimasho isu badashay. Saraakiisha ayaa sheegaya in 19 qof ay dhinteen ka dib markii laamaha ammaanka ay isku dayeen in ay xoog ku kala eryaan dadka dibadbaxyada dhigaya balse kooxda xaquuqul insaanka ee Amnesty International ayaa sheegtay in ay heshay warar xaqiiqa ah oo muujinaya in 37 qof lagu dilay rabshadahaasi.
Maxay Suudaan uga dhigantahay cunaqabteynta laga qaaday
Taageerayaal badan oo kuwa mucaaradka ahi ayaa xabsiga la dhigay, waxaana laamaha ammaanku ay waxyeello u geysteen weriyeyaasha wararka ka soo tebinayay dibadbaxyada ka dhanka ah dowladda.
Arrimahani oo dhan ayaa cadaadiska ku sii kordhinaya madaxweyne Al-Bashiir oo 75 sano jir ah, kaa oo sheegay in dadku ay u muuqdaan kuwo daallan isla markaana jahawareersan. Hadalkaasi ayuu jeediyay usbuucii la soo dhaafay mar uu la hadlayay saraakiisha ugu sarreysa booliska.
Waxa uu ugu baaqay in aysan xoog u adeegsan dadka dibadbaxyada dhigaya balse isla markiiba hadalkiisa ayaa is khilaafay oo waxa uu sheegay in dilku yahay mid ay amnigu ku sugayaan.
Hadalkaasi ayaa dadka qaar waxa ay ku micneeyeen in uu yahay ruqsad ciidamadu ay ku cabburin karaan shacabka.
Maalintii xigtay, kumannaan qof ayaa isugu soo baxay bartamaha magaalada Khartuum, waxaana halkaasi lagu toogtay saddex qof oo dhammaantood madaxa laga toogtay. Hawlwadeennada xaquuqul insaanka ayaa sheegaya in sidoo kale shiishyahanno ka tirsan ciidamada dalkaasi ay toogteen nin dhakhtar ah.
Dowladda ayaa dhankeeda dad ka soo jeeda gobolka galbeedka ku yaal ee Daarfuur ku eedeyneysa in ay soo abaabulayaan dibadbaxyadani isla markaana ay curyaaminayaan dowladda.
Koox dhallinyaro ah oo ah ardayda reer Daarfuur ee aan Carabta ahayn ayaa xabsiyada la dhigay waxaana lagu eedeeyay in sirdoonka Israa’iil uu siinayay tababar lagu xagal daacinayo dowladda.
Saaxibbadooda ayaa arrintaasi beeniyay, waxa ayna dowladdu ku eedeeyeen in ay arrintaasi qiil uga dhiganeyso xarigga ardaydaasi.
Si taageero loogu muujiyo ardaydaasi ay dowladdu xirtay, ayaa dadka dibadbaxyada dhigaya waxa ay halkudhig ka dhigteen”adigan cunsuriga cawaanka ahow, dhammaantayadu waxaan nahay reer Daarfuur.”
Madaxweyne Al-Bashiir waxa uu ballan qaday in uu mushaaraadka u kordhiyo shaqaalaha dowladda si culeyska loo yareeyo balse arrintaasi ayay suurtagal tahay in aysan xal u noqon doonin xaaladda jirta.
Arbacadii las oo dhaafay waxa uu tusaale ahaan u soo qaatay dalka Suuriya, waxa uuna taageerayaashiisa u sheegay in xasillooni darradu ay u horseedi doonto in ay qaxooti noqdaan.
Balse dalakasi Suudaan ayaa muddo sanado ah la daalaa dhacayay dhibaato dhaqaale, waxaana xaaladda uga sii daray go’itaankii Suudaanta Koonfureed ee sanadkii 2011. Arrintaasi ayaa sababtay in kala bar dhulkii qaniga ku ahaa kheyraadka uu maro dhinaca Suudaanta Koonfureed.
Suudaan ayaa sidoo kale laga go’doomiyay caalamka intiisa kale. Inkastoo sanadkii 2017 la qaaday xayiraadihii loogu soo rogay arrimo la xiriira taageeridda argagixisada iyo tacaddiyada ka dhanka ah xaquuql insaanka, haddana xaaladdu wax weyn iskama bedelin.
Dedaalladii uu madaxweyne Al-Bashiir ugu jiray helitaanka xulufo cusub, sida in uu booqdo madaxweynaha Suuriya iyo in uu ciidamo taageero ah u diro Sucuudiga ayaa u muuqda in aysan caawineyn oo uusan waxbo ka faa’iideyn.
Dhanka kale, inkastoo wali safaf dhaadheer loogu jiro rootiga iyo bangiyada, haddana xaaladda ka jirta Khartuum ayaa aad isu badashay tan iyo markii ay billowdeen dibadbaxyada.
Waxaa jirta cabsi weyn. Dumarka qaarkood ayaa sheegaya in aysan bannaanka u bixin sababtoo ah ma doonayaan in carruurtoodu ay dibadda u baxaan oo ay ku biiraan dibadbaxyada sida dhacday xilli ay dhacayeen dibadbaxyo ka dhan ah dowladda muddo haatan laga joogo shan sano.
Balse sidoo kale waxaa jirta in dadku ay geesinimo muujinayaan. Waxaa la arkayay dadka oo saaran guryaha korkooda oo ku qeylinaya ciidamo hubeysan oo waddooyinka maraya.